Archdiocese of Mandalay blog: သင်ကံကောင်းသူပါ။
* If you woke up this morningFairly healthy, Congratulations, becauseMillion people will not live to pastaweek. *
ကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ နေ့သစ်တစ်ခုကို သင်နိုးထနိုင်ခဲ့ပြီလား…ဒါဆိုသင် ၀မ်းမြောက်လိုက် ပါတော့…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူသန်းပေါင်းများစွာဟာ ရက်သတ္တပတ်လေးကျော်အောင်
* If you have never experienced the danger of war,The loneliness of imprisonment,**The agony of torture,Or cold and hunger,Congratulations, you better fate than5million people. *
စစ်ပွဲရဲ့ ကြောက်မတ်ဖွယ်တွေ၊ အထီးကျန် အကျဉ်းချ ခံထားရမှုတွေ၊ နာကျင်ငြီးတွားမှုတွေ၊ ချမ်းအေးမှုတွေနဲ့ မွတ်သိပ်မှုတွေ…ဒါတွေကို သင် မတွေ့ကြုံ မခံစားဖူးဘူး မဟုတ်လား၊ ဒါဆိုသင် ၀မ်းမြောက် လိုက်ပါတော့ …ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၅-သန်းကျော်ဟာ အဲဒီကြမ္မာဆိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်လေ။
* If you can participate in religious activitiesWithout fear of harassment, *
* Arrest, torture, or death,Congratulations, you have more freedom than 1.5 billion people . *
ခြိမ်းခြောက် ဟန့်တားမှုတွေ မရှိဘဲ မတရား ဖမ်းဆီးမှုတွေ မရှိဘဲနှိပ်စက် ညှင်းပန်းမှုတွေ မရှိဘဲ သတ်ဖြတ် ညှင်းဆဲမှုတွေ မရှိဘဲ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ခွင့် ရနေသလား၊ ဒါဆို သင် ၀မ်းမြောက်လိုက်ပါတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူဦးရေ ၁သန်းခွဲကျော်ထက် သင် လွတ်လပ်ရေး ရနေပြီလေ။
* If you have food,Have clothes to wear,There isaplace to live, congratulations,You are richer than 70% of the world. *
သင့်မှာ စားစရာတွေ ရှိနေတယ်မလား ၀တ်စရာ အ၀တ်တွေလည်း ရှိမဟုတ်လားနေစရာ အိမ်လေးကော ရှိနေတယ်မလား ဒါဆို သင် ၀မ်းမြောက်လိုက်ပါတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၇၀%နှုန်းထက် သင်က ချမ်းသာနေပြီလေ။
* If you have saving in the bank,Wallet with money, There are some coin left, congratulations,You are among the world's top 10% of the rich. *
ဘဏ်ထဲမှာ ငွေလေး ဘာလေး စုထားတယ်မလား ဒါမှမဟုတ် သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ငွေအနည်းငယ် ရှိနေတယ်မလား ဒါမှမဟုတ် သုံးစရာ ငွေစလေးတွေ ကျန်နေသေးတယ်မလား ဒါဆိုသင် ၀မ်းမြောက် လိုက်ပါတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ချမ်းသာသူများ ၁၀%နှုန်းထဲမှာ သင် ပါဝင်နေခဲ့ပြီလေ။
* If you often looked up withasmile,And the heart to thank God,You are happy, Because most people can but will not do so.*
လောကကြီးကို အပြုံးပန်းတွေနဲ့ သင် မကြာခဏ ကြည့်နေနိုင်တယ် ဘုရားသခင် (သဘာဝလောကကြီး) ကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ နှလုံးသားလည်း ရှိနေတယ် ဒါဆိုသင် ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင် လိုက်ပါတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူအများစုဟာ အဲဒီလို လုပ်နိုင် စွမ်းရှိပေမယ့် လက်တွေ့ မလုပ်ကြတော့မှာ သေချာနေလို့ပါပဲ။
* If you are able to hold someone's hand,Or give themahug,Or pat them on the shoulder,Congratulations , because you are with the ability to heal people's hearts. *
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင် ထားနိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် ကြင်နာစွာ ထွေးပွေ့နိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် ပုခုံးနှစ်ဘက်ကို ကြင်ကြင်နာနာ ယုယနိုင်တယ် ဒီလိုဆို သင် ၀မ်းမြောက် လိုက်ပါတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သင်ဟာလူတွေရဲ့ နှလုံးသားဒဏ်ရာကို ကုစားပေးနိုင်စွမ်း ရှိနေလို့ပါပဲ။
* If you can read this article That is double fortunate:Some people think of you asafriend,And there are 1.5 billion people illiterate. *
ဒီစာလေးကို သင် ဖတ်တတ်တယ်မလား ဒါဆိုရင် သင်ဟာ နှစ်ထပ်ကွမ်း ကံထူးရှင်ပေါ့ အချို့သူတွေက သင့်ကို (ဘ၀တူ)သူငယ်ချင်းလို့ ယူဆလိုက်ကြမယ်ပြီးတော့ …ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၁-သန်းခွဲကျော်က စာ မဖတ်တတ် ကြဘူးလေ။
* You probably never think ofHow lucky you are now! ? *
ကဲ… ပြော သင်ဟာလောကမှာ ဒီလောက်တောင် ကံကောင်းနေတယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မစဉ်းစား မိဘူးမလား….။
* Wellness And Happiness is always with You *
၀န်ခံချက်။ ။ ဖာသာရ် တစ်ပါးပေးပို့ထားသော စာတစ်စောင်ကို ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by ကောင်းထက်ထွန်း at 7:13 AM